यस्तो छ आज २०७६ पुस १२ गते आइताबारको भाग्यफल « Postpati – News For All
भारतमा कोरोना संक्रमित संख्या ५ हजार नजिक, मृतकको संख्या कति ?
कोरोना भाइरसको महामारी सुरू भएको चीनको वुहानबाट लकडाउन हटाइयो
आज २०७६ चैत २६ गते बुधबार तपाईको भाग्यफल कस्तो छ ? पढ्नुस
कोरोना भाइरसले अमेरिकामा एकैदिन १ हजार ९ सय बढीको मृत्यु
कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या ८२ हजार ५८ पुग्यो, संक्रमितको संख्या कति ?
सरकारले यसकारण दियो राहत बाँडेको फोटो-भिडियो फेसबुकमा नराख्न निर्देशन
सांगितिक माहोलमा दिन वित्ने हुदा मन प्रशन्न रहनेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा गरिएको लगानीबाट राम्रै प्रतिफल प्राप्त हुनेछ । मान सम्मान तथा इज्जत प्रतिष्ठामा बृद्धि हुनेछ । निति निर्माण तहमा तपार्ईँको सहभागिताले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्नेछ । व्यापार व्यावसायमा प्र्रशस्त नाफा कमाउन सकिनेछ भने पढाइ लेखाइमा भनजस्तो सफलता हुने हुदा मन प्रशन्न रहनेछ । नयाँ काम पाउने तथा नोकरिमा पदोन्नतीको गतिलो योग रहेकोछ ।
यात्रा गर्दा ध्यान दिनुहोला, लामो दुरिको शैक्षिक यात्रा तथा धार्मिक यात्रा गर्दा बाटोमा बाधा अवरोधहरुको सामना गर्नु पर्ने हुनसक्छ । स्वास्थ्यमा समस्या आई काम गर्न असजिलो महशुष हुनेछ । धार्मिक स्थल तथा मन्दिर तिर गई दर्शन गर्न सकिनेछ । पढाइ लेखाइ तपार्ईँ आफ्नै कारणले बिग्रने सम्भावना रहेकोछ । साझपख समय राम्रो रहेकोले व्यापारमा लगानी गरि मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ ।
स्वास्थ्य सबल हुने हुँदा उपलब्धिमुलक कामहरु गरेर दैनिकी जीवन फेरिनेछ । खोज तथा अनुशन्धानको क्षेत्रमा गरिएको लगानी बाट भनजस्तो नतिजा आउँने हुँदा मन प्रशन्न हुनेछ । अध्ययन अध्यापनमा प्रगति गर्न सकिने तथा नतिजा आफैतिर ल्याउँन सकिनेछ । माया प्रेममा नजिक हुनेसमय रहेकोछ भने दिदिबहिनिको सहयोगले राम्रा कामहरु गर्न सकिनेछ । व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जाने तथा आकस्मिक धन प्राप्तिको योग रहेकोछ ।
पर्यटकीयय तथा रमाईलो यात्रा हुनेछ भने भौतिक सम्पति तथा सवारी साधन प्राप्तिको योग रहेको छ । व्यापार व्यावसायबाट प्रशस्त आम्दानी हुनेछ । मायाप्रेम तथा पतिपत्नि विचको सम्वन्धमा विस्वासको बाताबरण मजभुत भएर जानेछ । पारिवारिक माहोलमा दिन बित्न तथा मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नेछ । साझपख समय मध्ययम रहेकोले पढाइ लेखाइमा मन जाने छैन भने नतिजा अरुकै हातमा जानेछ ।
शत्रु तथा प्रतिस्पर्धी हरुलार्ई हरेक क्षेत्रमा परास्त गर्दै भनेजस्तो उपलव्धि हासिल गर्न सकिनेछ । आम्दानीका स्रोतहरु फराकिला पार्दै तत्काल नयाँ व्यावसाय थालनी गर्न सकिनेछ । पढाइ लेखाइमा अरुलाई किनारा लगाउँदै स्कूल तथा कलेजमा छुट्टै पहिचान बनाउँन सकिनेछ । माया प्रेम तथा मित्रताको बन्धन कसिलो भएर जानेछ भने मामा तथा मावलि पक्षबाट तपार्ईँको काममा भनेजस्तो सहयोग पाइने हुँदा मन प्रशन्न रहनेछ ।
पढाइ लेखाइमा भनजस्तो प्रगति नहुदा नतिजा अरुकै पोल्टोमा पर्नेछ । व्यापार व्यावसायमा भनेजस्तो आम्दानी नहुने हुदा दैनिक कामहरु प्र्रभावित हुनेछन् भने शिक्षा क्षेत्र सँग सम्बन्धित व्यावसाय भने फस्टाएर जानेछ । मायाप्रेममा एक अर्कालाई अविस्वास गर्नाले छुट्टिनु पर्ने अधिक सम्भावना रहेकोछ । साझपख समय राम्रो रहेकोले कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा तपाईँ अग्र स्थानमा आउँनेछ ।
राजनीति तथा समाजसेवामा जनतासँग सन्तुलित व्यावहार गर्नुहोला आलोचनाको शिकार हुनुपर्नेछ । व्यापार व्यावसायमा लगानी गर्ने समय नरहेकोले केहि समय पर्ख र हेरको रणनिति अपानाउनु होला । आमाको तथा आमा सरहका मानिसको स्वास्थ्यमा समस्या आई उपचार खर्च बढ्नेछ । अध्ययन तथा अध्यापनमा मन नजाने हुनाले अरुभन्दा पछि परिनेछ । माया प्रेममा सामान्य मनमुटाव बढ्नेछ ध्यान दिनुहोला ।
पराक्रम बढेर जाने हुनाले जोसिलो काम गर्ने जागर आउनेछ । सानो प्रयत्नले राम्रो काम गरि फइदा लिन सकिनेछ भने प्रतिस्पर्धीहरु परास्त हुनेछन् । दाजुभाई तथा छिमेकिहरु सँगको सम्बन्धमा सुधार भएर जानेछ । छोटो तथा रमाईलो यात्रा हुन सक्छ । उत्पादित उद्योगमा लगानी बढाई भने जस्तो रुपैया पैसा कमाउँन सकिनेछ । साझपख समय मध्ययम रहेकोले आफन्तसँग घरायसि कुरामा राय बाजिनेछ ।
पढाइ लेखाइमा खासै ध्यान नजादा बिद्या तथा प्रतिश्पर्धामा अरुभन्दा पछि परिनेछ । कुटुम्बसँग मनमुटाब बढ्ने हुदा आजको दिन टाढानै रहनु राम्रो रहेको छ । बोल्दा वा निर्णय गर्दा ध्यान दिनुहोला आत्मघाती पनि हुनसक्छ । खानपानमा ध्यान नदिदा स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ । साझपख समय राम्रो रहेकोले पढाइ लेखाइकै सवालमा लामो दुरिको यात्राको तय हुनेछ ।
व्यापार व्यावसायमा लगानी गरि प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिनेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा गरिएको लगानी खेर जानेछैन भने पद पाउँने योगलाई नकार्न सकिदैन । सामाजिक कामहरु समयमा सम्पादन हुने हुनाले मान सम्मान तथा इज्जत प्रतिष्ठामा बृद्धि भएर जानेछ । पारिवारिक माहोलमा दिन बित्नेहुदा मन प्रशन्न हुनेछ । प्रेममा सफलता तथा सामिप्यता बड्नेछ । बिद्यामा गरिएको लगानीबाट राम्रै प्रतिफल प्राप्त हुनेछ ।
आफन्त तथा परिवारकै सदस्यहरुबाट सहयोग नपाइने हुदा कामहरु थाति रहनेछ । व्यापारमा लगानी गर्ने समय नरहेकोले केहि समय पर्ख र हेरको रणनिति अपनाउँनुहोला । माया प्रेममा अरुकै नकारात्मक टिका टिप्पणिले मनमुटाव बढ्ने योग रहेकोछ भने पति पत्निबिच अविस्वास बढ्ने योग रहेकोछ । साझपख समय राम्रो रहेकोले राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको काम गर्न सक्दा नाम तथा दाम दुवै कमाउँन सकिनेछ ।
व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जाने हुनाले आउने आम्दानीले उत्साह जगाउनेछ । पानी तथा खनिज पदार्थको व्यावसायबाट मोटो रकम हातलागि हुने योग रहेकोछ । प्राकृतिक स्रोत तथा पैत्रिक सम्पतिको प्रयोग गरि मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ । पढाइ लेखाइमा अरुभन्दा अग्र स्थानमा तपार्ईँको नाम आउनेछ भने शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित काममा बिषेश रुचि बढ्नेछ । साझपख स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ ध्यान दिनुहोला ।
२०७६ माघ १२,आईतवार को दिन प्रकाशित
आज २०७६ चैत २५ गते मंगलबार तपाईको भाग्यफल कस्तो छ ? पढ्नुस
आज २०७६ चैत २४ गते सोमबार तपाईको भाग्यफल कस्तो छ ? पढ्नुस
आज २०७६ चैत २२ गते शनिबार तपाईको भाग्यफल कस्तो छ ? पढ्नुस
आज २०७६ चैत २१ गते शुक्रबार तपाईको भाग्यफल कस्तो छ ? पढ्नुस
आज २०७६ चैत २० गते बिहीबार तपाईको भाग्यफल कस्तो छ ? पढ्नुस
अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानको प्रतिबन्ध पनि लम्बियो
कोरोना रोक्न चार वटा रणनीति र योजना अनुसार काम गरिरहेका छौ: गृहमन्त्री थापा (अन्तर्वार्ता)
लकडाउन खुकुलो बनाउने उच्चस्तरीय समितिको निर्णय, के-के गर्न पाइन्छ ?
बागलुङकी कोरोना संक्रमित युवतीका परिवारको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट आयो